Paul Pogba oo kooxdiisa la wadaagay go’aankiisa ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa – kooxdee ayuu doortay inuu ku biiro? – Gool FM
Paul Pogba oo kooxdiisa la wadaagay go’aankiisa ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa – kooxdee ayuu doortay inuu ku biiro?
Abdirashid Mohamud June 15, 2019
(Manchester) 15 June 2019. Kubad sameeyaha Manchester United Paul Pogba ayaa go’aankiisa ugu dambeeya ee la xiriira mustaqbalkiisa la wadaagay kooxdiisa sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya dalka Ingiriiska, waxaana muuqata inuu xiddigaan ka quustay ka ciyaarista Old Trafford.
Paul Pogba wuxuu doonayaa inuu isaga guuro magaalada Manchester, waxaana saxiixiisa ku dagaalamaya kooxdisii hore Juventus iyo sidoo kale Real Madrid, balse sida lagu qoray Mirror xiddigaan wuxuu doortay ku biirista Real Madrid iyo inuu ka hoso ciyaaro Zidane.
Waxaa jira warar sheegaya in agaasimaha Bianconerri (Fabio Paratici) uu kasoo dagay London si uu wadahadal ula furo kooxda Red Devils, ayna ka hadlaan arrinta Paul Pogba, balse doonita ay kooxda marwada duqda ah dooneyso waxaa ka xoog badan jaceylka uu xiddigaan u qabo inuu ka dhinac safto Zidane.
Zidane ma qarsan inuu aad u xushmeeyo Paul, sidoo kalana waxey warbaahinta Spain isku raaceen inuu maamulka ka dhaadhiciyay in xiddiga reer France uu noqdo saxiixiisa ugu dambeeya xagaagan.
Dhanka kale Paris Saint Germain ayaa qiimeyneysa xaaladda xiddigaan heerka caalami, waxeyna doonayaa iney dib ugu celiyaan wadankiisa – walow ay sidoo kale xiriir dhaw la leeyahiin Mino Riola.
HORDHAC: Argentina vs Colombia - Lionel Messi oo caawa bilaabi doona hardankiisa ku guuleysiga Copa America.
“Waxaana doonayay inaan ka dhuunto adduunkan, kaddib kulankii Liverpool” - Luis Suarez